Famerenana: Evolve OS Beta 1 | Avy amin'ny Linux
Famerenana: Mivoatra OS Beta 1
Percaff_TI99 | | Fitsinjarana
Ikey doherty dia mpandraharaha mavitrika tokoa Linux Mint; manokana LMDENa izany aza, nanapa-kevitra ny hiala izy noho ny antony manokana ary namorona ny tetikasany manokana; ny fizarana SolusOS.
Niala avy tany LM fotoana vitsy lasa izay, noho ny antony manokana roa dia tsy tiako ilay lalana alehako LMDE, zavatra iray izay nanaovako ezaka be izany ary raha ny hevitro dia tsy nampanantenaina ireo fampanantenantsika, noho izany dia teraka SolusOS.
SolusOS nanomboka nisy elanelana natao teo amin'ireo fizarana hafa, fanovana kely tao Gnome 3 manatsara Fiverenana Gnome manoloana ny traikefan'ny mpampiasa, ny fametahana fonosana ary ny mpamily nohavaozina ankoatra ny fanatsarana hafa manan-danja, ary koa ny hakantony tsara amin'ny kanto, nahasarika ny sain'ny mpampiasa mihoatra ny iray izy ireo.
Saingy, nanjary zava-poana ilay toa tetikasa farany rehefa nanapa-kevitra ny handao ity tetikasa ity indray izy - ny tetikasany manokana amin'ity raharaha ity.
amin'izao fotoana izao Ikey doherty dia eo am-pomba ady vaovao, amin'ity indray mitoraka ity no antsoina ny fizarana eo ambany fiandraiketany Mivoatra OS ary io no horesahintsika amin'ity fanadihadihana ity.
Ity fizarana vaovao ity dia noforonina hatrany am-boalohany -Avy amin'ny Scratch- ary manana singa miavaka antsoina hoe birao vaovao Budgie ary ny rafitra fitantanana fonosana malaza PiSi (Nampiasain'i Pardus y Pisi Linux), izay tazonina ho «eopkg"anatiny Mivoatra OS.
2 Endrika ivelany:
3 Ataovy miavaka ny Evolve OS:
5 Endri-javatra hafa:
Ny sary Evolve-OS-Beta1.iso dia sintonina avy amin'ny tranonkala ofisialy mivoatra ary nampiasa ny fametrahana tamin'ny alàlan'ny USB aho.
Avy amin'ny terminal na console:
Ny liveCD dia misy amin'ny 64-bit ary mbola tsy manana ny fanohanan'ny UEFI farafaharatsiny mandra-pahatongan'ny famoahana beta 2.
raha mbola Lightdm izy no mpitantana ny fanombohana ary tsy miseho izany amin'ny fanombohana ny rafitra, birao tsotra nefa voalamina tsara no miseho eo alohanay.
Araka ny azonao an-tsaina EvolveOS tsy afa-mandositra ny fanaon'ny mpitarika ny tetikasa izy. Ny birao Budgie dia ny sainan'i EvolveOS ary mifantoka amin'ny fahatsorana sy ny hakantony, miampy ny fitoviana na ny fikasana hanakaiky kokoa ny latabatr'i ChromeOS.
Araka ny tranonkala ofisialy:
Ny birao Budgie mitambatra seamless amin'ny stack ny GNOME, mampiasa teknolojia ifotony hanomezana traikefa amin'ny birao hafa. Amin'ny fanahin'ny loharano misokatra, ny tetikasa dia mifanaraka ary azo zaraina amin'ny fizarana hafa Linux.
Fomba iray hafa an'ny Budgie dia ny fanahafana ny fisehoan'ny birao Gnome 2.
Ataovy miavaka ny Evolve OS:
Na eo aza ny fahatsorany fananganana budgie mamela antsika hanamboatra tsara ny rafitra, saika sahy milaza aho fa tsy ilaina ny misintona fampiharana fanampiny ho an'ity fizarana ity.
Amin'ny alàlan'ny default dia misy menio kely misy lohanteny (sokajy) izay nanapa-kevitra ny hanova ny maody nentim-paharazana izay hitantsika Linux Mint ohatra, toa intuitive kokoa izy io ary noho izany dia haingana kokoa rehefa mitady rindranasa.
Fampidirana lohahevitra Gnome Panel mitondra antsika hanakaiky kokoa ny tontonana nentim-paharazana GNOME, na dia tsara aza ilay tonga tampoka.
Ny zavatra nahasarika ny saiko dia ny mety hanampiana "padding" amin'ireo applet an'ny taskbar, tsy tadidiko fa nahita azy tamin'ny fizarana hafa.
Ao amin'ity galeriana manaraka ity dia azonao atao ny mahita ireo fizarana voalaza ireo:
Mikasika ny fanavaozana sy ny fametrahana ny rindranasa, manana ivon-toeran'ny rindrambaiko miaraka amina interface tsotra sy milamina izy hiasa, tanjona manokana amin'ny fampandrosoana ny EvolveOS, toy izany koa no mitranga amin'ny fampifanarahana ireo fizarana hafa, toy ny fanaingoana ny klavier sy ny totozy, ny faritra ary ny fiteny, sns.
Izany koa dia manana Mpanampy Evo, mpamosavy kely manolotra antsika hametraka rindranasa hafa, amin'ity tranga ity Google Chrome manolotra fanampiana koa izy amin'ny alàlan'ny forum sy fantsona IRC.
Files (mpitantana rakitra nautilus)
Araka ny tranonkala ofisialy, Mivoatra OS tonga amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fanohanan'ny endrika maro izao, ary misy codec maro ao anaty fampidinana ISO. Ohatra, H.264. MP3 y DVD, miasa daholo ny boaty ary tsy misy fikirakirana ilaina, ary azo idirana amin'ny fampiasana totem efa napetraka na fonosana Rhythmbox.
Tsy maintsy ekeko izany Ikey doherty Raha ny fijeriko azy dia mpamorona mahay izy, ny asa izay ampanaoviny matetika dia manana tombo-kase avo lenta, kanto ary milamina.
Ity layout manokana ity dia tena haingana sy malama na eo aza ny fampiasana maody mivantana. Minimalista ary tena tsotra ny manamboatra azy, izany no tsipika kasainao harahina Ikey, fadio ny bloat eo amin'ny birao misy fipetrahana fanampiny, ary koa ny fampidirana ny manager package PiSi Heveriko fa safidy tena tsara io (hita eo amin'ny seha-pifanakalozan-kevitra maro ny hatsarany).
Ho fandinihan-tena manokana dia manantena aho fa hanohy ity tetik'asa ity mandrapahatongan'ny famoahana azy ary hamerina ny fahatokisan'ireo mpampiasa anao izay diso fanantenana tamin'ny fahataperan'ilay fizarana teo aloha; fa ambonin'izany rehetra izany dia ny fanavaozana ny fahatokisan'ny mpamorona izay te-hiara-miasa Mivoatra OS ary hamafiso ity tetikasa vaovao ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Famerenana: Mivoatra OS Beta 1
Mirary soa an'i Ikey Doherty ho tsara vintana amin'ny tetikasany aho, saingy mieritreritra aho fa tsy tokony ho matotra kely kokoa isika. Raha hanomboka ahy indray izy amin'ny tetikasa iray izay hamela olon-kafa ho lao dia aleoko ho eo amin'izay misy ahy .
Ahoana ny fomba fametrahana ny rindrambaiko ho an'ity distro ity?
raha mampiasa pisi ianao dia tokony ...
sudo pisi apetraho ny app-nao
Tiako be i Pisi, mihoatra noho ny mpitantana fonosana hafa sy ireo fonosana misy azy ireo miaraka amin'ny fanohanan'ny delta. Mampalahelo fa tsy misy distro bebe kokoa mampiasa azy io, mandraka androany dia manenina aho fa i Pardus no tena nahazoako aina, miaraka amin'ny mpandimby azy dia tsy mahatsiaro tena ho voaro aho.
toa mahaliana ilay izy ... fa akorany fotsiny io, tsy hitako izay idirana amin'ny fampidinana distro izay mahalala izay hoaviny, saingy hitako fa azo ampiasaina ny akorandriaka
ps: mila fonosana kisary sahaza ho an'ny interface ianao, mahatsiravina ireo sary systray
Bioacler dia hoy izy:
Ny endriny dia toa voamainty, fa ny sary masina dia toy ny awita an'i Gnome. Ratsy!
Mamaly an'i Bioacler
Raha ny mahazatra dia miandry zavatra milamina aho, saingy miala amin'ilay zavatra D aho;
toa mahafatifaty tsara: c
Payuta dia hoy izy:
Izaho dia iray tamin'ireo nanana SolusOS ho distro lehibe ho azy ireo, ary ho ahy dia tsara izany.
Ankehitriny dia hizaha toetra ny birao amin'ny rakitrao aho ... andao hojerentsika ny fomba ... hieritreretantsika ny manandrana aoura mivoatra amin'ny fitaovana sasany hanaovana fitsapana.
Mamaly an'i Payuta
Fandaharana fototra miaraka amin'ny pseint (fizarana 3)
Mampiavaka ny Zuum P55